Inkampani yoomatshini baseZhejiang Yipeng ——Indibano yokusebenzela
Ukusukela ngo-2006, i-EPONT Jack sisixhobo sogcino lwemoto yobuchwephesha (iijekhi zoxinzelelo lwe-hydraulic, ikhreyini yenjini) umenzi.
Ezinye izixhobo zokuPhakamisa
Epont Professional Jack Manufacturer——Ucweyo
Inkampani yoomatshini baseZhejiang Yipeng ——Iworkshop
SiyiZhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. --- EPONT,Iimveliso zethu zithunyelwa ngaphandle kumazwe angaphezu kwama-30 afana ne-USA, iJamani, iJapan, i-Itali, i-UK, iKorea, i-Australia, iKhanada kunye njl. Abathengi be-OEM abaziingcali kuloliwe, iimoto, iforklift kunye noomatshini bokwakha, sele sinentsebenziswano neenkampani ezingaphezu kwe-10 eziPhezulu zehlabathi ezingama-500 njengomnye wababoneleli bazo abakhulu eTshayina.
1.Sinemizila emi-4 yokuvelisa kunye nemigca emi-2 yokuvelisa unyango lobushushu, i-bottle jack ngenye imini sinokuvelisa malunga ne-5000pcs, malunga ne-jack yomgangatho sinokuvelisa i-500pcs.
I-2.Inkampani ihlanganisa indawo ye-square metres ye-17000, inkampani ithatha "I-Reputation based, umgangatho wokuqala" ifilosofi yoshishino, ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni, ngokuthe ngcembe, ukuseka idumela elihle kwishishini, isikali seshishini sikhula. I-YIPENG kholelwa ngokujoyina kwakho, kuya kubakho ingomso elingcono, kholwa yi-YIPENG, khetha i-YIPENG, ujoyine i-YIPENG, siya kukunika eyona nkonzo ilungileyo kunye nesiqinisekiso.
I-3.Inkampani ixhotyiswe nge-CNC lathe, umatshini wokusila, umatshini wokusila, uvavanyo lomthwalo we-static, umatshini wokuvavanya umthwalo oguqukayo, umvavanyi we-Rockwell hardness, i-robot ye-YASKAWA ye-welding, i-punching processing kunye nezixhobo zokuvavanya, ukuvumela umgangatho wemveliso yenkampani kunye nokukhusela okuthembekileyo. imingxunya yamacandelo aphambili kwinkampani - jack cylinder, ngokukodwa ukufumana umatshini laser sokomba ukuqinisekisa ukuchaneka achining yokubeka, umngxuma umda, ukuze umgangatho imveliso ibe umtsi qualitative.
iimveliso 4.Our ikakhulu kumazwe angaphandle kumazwe angaphezu kwama-30 ezifana USA, eJamani, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Ostreliya, Canada kunye etc.Our abathengi ziquka abathengi abaninzi OEM abakhethekileyo ngololiwe, imoto, forklift kunye noomatshini bokwakha. ,sele sinentsebenziswano neenkampani ezingaphezulu kwe-10 kwiinkampani eziphezulu ezingama-500 zehlabathi njengomnye wababoneleli bazo abaphambili eTshayina.
I-Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. yasekwa ngo-2006. Esembindini wedolophu yebhanti yoqoqosho yaseYangtze, iJiaxing, apho ikufuphi neShanghai, Hangzhou, Ningbo, isixeko saseSuzhou, njl. . Inkampani yingqokelela yee-Engine Crane ezahlukeneyo, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack elishishini elikhethekileyo lophando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengisa. Inkampani igubungela ummandla we-17000 square metres, inkampani ithatha "iReputation based, umgangatho wokuqala" ifilosofi yoshishino, ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni, ngokuthe ngcembe, ukuseka igama elihle kushishino, isikali soshishino siyakhula. I-YIPENG kholelwa ngokujoyina kwakho, kuya kubakho ingomso elingcono, kholwa yi-YIPENG, khetha i-YIPENG, ujoyine i-YIPENG, siya kukunika eyona nkonzo ilungileyo kunye nesiqinisekiso. Epont mechanical yingqokelela ezahlukeneyo Engine Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack elishishini elikhethekileyo lomzimba kuphando, uPhuhliso, iMveliso kunye neentengiso.1. SINEZIQINISEKISO: Sinesiqinisekiso sesiqinisekiso esisemthethweni2. I-TEKNOLOJI YOKWENZA: Uphando oluqhubekayo kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha3. UKWANISA UMTHENGI: Ukubonelela ngemveliso eyanelisayo.
I-Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd.yasekwa ngo-2006. Emi kumbindi wedolophu yebhanti yezoqoqosho yaseYangtze, iJiaxing, apho ikufuphi neShanghai, iHangzhou, iNingbo, isixeko saseSuzhou, njl. Inkampani yingqokelela yee-Engine Crane ezahlukeneyo, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack elishishini elikhethekileyo lophando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengisa. Inkampani igubungela ummandla we-17000 square metres, inkampani ithatha "iReputation based, umgangatho wokuqala" ifilosofi yoshishino, ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni, ngokuthe ngcembe, ukuseka igama elihle kushishino, isikali soshishino siyakhula. I-YIPENG kholelwa ngokujoyina kwakho, kuya kubakho ingomso elingcono, kholwa yi-YIPENG, khetha i-YIPENG, ujoyine i-YIPENG, siya kukunika eyona nkonzo ilungileyo kunye nesiqinisekiso. Epont mechanical yingqokelela ezahlukeneyo Engine Crane, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack elishishini elikhethekileyo lomzimba kuphando, uPhuhliso, iMveliso kunye neentengiso.1. SINEZIQINISEKISO: Sinesiqinisekiso sesiqinisekiso esisemthethweni2. I-TEKNOLOJI YOKWENZA: Uphando oluqhubekayo kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha3. UKWANISA UMTHENGI: Ukubonelela ngemveliso eyanelisayo.
Sizinze eZhejiang, eTshayina, siqale ngo-2006, sithengisela uMzantsi-mpuma Asia (15.00%), iAfrika (15.00%), kuMbindi Mpuma (10.00%), eMpuma Yurophu (9.00%), kuMntla Melika (8.00%), eMzantsi Melika (7.00%),kuMazantsi Yurophu(7.00%),kuMbindi Melika(6.00%),uMzantsi Asia(6.00%),uMntla Yurophu(5.00%),iMarike yasekhaya(5.00%),eMpuma Asia(3.00%),eNtshona Yurophu 3.00%),Oceania(00.00%). Kukho abantu abangama-51-100 bebonke kwiofisi yethu.
Ibhotile ye-Hydraulic Jack, i-Hydraulic Floor Jack, i-Engine Crane, i-Scissor Jack, i-Shop Press
I-Epont iphumelele i-ISO / TS16949: 2009, ISO9001: isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwe-2015, iphunyezwe ngokupheleleyo inkqubo yolawulo lomgangatho, iphumelele isiqinisekiso senkqubo yolawulo lokusingqongileyo, kwaye iijacks zidlulile i-CE, GS.& Isiqinisekiso seTUV.
ImiGaqo yoHambiso eyaMkelweyo: FOB;
Imali eyamkelekileyo yeNtlawulo:USD,EUR;
Uhlobo lweNtlawulo olwamkelweyo: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;